दुई महिनामै भित्रिए करिब ८ अर्बका मोबाइल, कुन देशबाट कति ? | Technical Master Nepal
काठमाडौं । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले हालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा मात्रै सात अर्ब ९४ करोड २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका मोबाइल सेट आयात भएका हुन् ।
यस अवधिमा कूल नौ लाख ९५ हजार पाँच सय थान मोबाइल भित्रिएका छन् । जसबापत राज्यले एक अर्ब २४ करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
कोभिडको महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउन महिनौंपछि खुकुलो भएको तथा दशैं नजिकिँदै गरेको अवस्थामा मोबाइलको आयात उल्लेख्य मात्रामा बढेको हो । यस अवधिमा स्मार्ट वाचको आयात समेत वृद्धि भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार साउन र भदौमा तीन करोड ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका १२ हजार ७२३ थान स्मार्टवाच नेपाल भित्रिएका छन् ।
यस्तै ४० करोड २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँका एक लाख ४४ हजार एक सय वटा इन्टरने राउटर आयात भएका छन् ।
यस्तै साउन र भदौमा ९२ करोड ८८ लाख २३ हजार मूल्यका १७ हजार १९४ थान ल्यापटप तथा नोटबुक र १० करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँका पाँच हजार ४२१ थान ट्याबलेट आयात भएका छन् ।
कुन देशबाट कति भित्रिए ?
सबैभन्दा बढी चीनबाट मोबाइल भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार साउन र भदौमा मात्रै चीनबाट पाँच अर्ब १२ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्यका आठ लाख पाँच हजार ९४७ वटा मोबाइल नेपालमा आयात भएका छन् ।
चीनपछि दोस्रो धेरै मोबाइल भारतबाट भित्रिएका छन् । भारतबाट साउन र भदौमा दुई अर्ब ५४ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँका एक एक लाख ७६ हजार ५०१ वटा मोबाइल आयात भएका छन् ।
भारतपछि भियतनामबाट २६ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँका १२ हजार ६५४ वटा मोबाइल आयात भएका छन् । बाँकी देशबाट जम्मा ३८७ वटा मोबाइल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
कुन देशबाट कति आयात भयो ?
देश संख्या रुपैयाँ
चीन ८०५९४७ ५१२३८४००००
भारत १७६५०१ २५४४६३०००
भियतनाम १२६५४ २६२५१९०००
हङकङ २०३ २०८५०००
अन्य १९३ ९३५५०००
ByReetu KC	 September 1, 2020 September 4, 2020
Spread the loveकोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित हालको कठिन परिस्थितिमा अनलाइन माध्यममार्फत कक्षा सञ्चालनको लागि सस्तो मूल्यमा डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकम र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गजाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बीच सम्झौता भएको छ । कम्पनी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच सम्झौता भएर देशभरका विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई उपलब्ध गराइएको ‘ह्याप्पी…